चीनमा लक्जरी ब्रान्डहरू डिजिटाइज गर्न: 2021 बिजुली ब्यापार प्रवृत्ति के हो? - Pandaily
Categories: Industry Xintian Wang मार्च 5, 2021 मार्च 5, 2021 मा पोस्ट
विश्वव्यापी यात्रा को लागी दबाइ को लागी, लक्जरी ब्रान्ड वैश्विक आर्थिक प्रणाली को दबाइ देखि पुनर्स्थापित गर्न को लागि एक नयाँ तरीका खोज रहेको छ। एक रणनीति हो, गुच्ची, कार्टियर, वायलङ र प्रडा सहित गत वर्ष चीनमा दर्जनौं लक्जरी ब्रान्डहरू बिक्रीमा मद्दत गर्न अनलाइन स्टोर खोलियो।
अर्को हेर्नुहोस्:गुच्चीले अलिबाबाको लिनक्स लक्जरी संग्रहालयमा सामेल गर्नेछ: चीनमा विश्वव्यापी लक्जरी ब्रान्डहरूको अर्को चरण
McKinsey 2019मा एक रिपोर्ट अनुसार, चीनी ग्राहकहरूले विश्वव्यापी लक्जरी ब्रान्ड बजारको लगभग एक-तेस्रोको लागि खाता पाउँछन्। तथापि, प्रायः किनमेल प्रायः विदेशी यात्रा गर्दा गरिन्छ।
डिजिटल लक्जरी सामान चीनको प्रबन्धक निदेशक पाब्लो माओ लंगले यसो भने: “आठ वर्ष पहिले अनलाइन बिक्री एक समस्या छैन।” “उच्च अन्त बजारमा, टिपिकल अनुभव र पसल सेवालाई अझ महत्त्वपूर्ण कारकको रूपमा मानिन्छ” भनी थपियो, र कोभिड-1 9ले धेरै चीजहरूको विकासमा छिटो दियो।
2021 चीनको डिजिटल वर्षमा अधिक लक्जरी ब्रान्डहरू हुन सक्छ। बिन 2020 रिपोर्टले देखाउँछ कि 2020 मा विश्वव्यापी लक्जरी माल बिक्री 23% घट्यो, एक रेकर्ड कम। एकै समयमा, व्यक्तिगत लक्जरी सामान बजार मूल्य 2019मा 288 अर्ब यूरोको तुलनामा 2020 मा 217 अर्ब यूरो पुग्यो। चीन संसारको मात्र लक्जरी सामान उद्योग हो जसले निरन्तर बढ्दो देश बनाएको छ। देशको व्यक्तिगत लक्जरी माल बजार आकार 44 बिलियन यूरो पुग्यो, 45% को वृद्धि। बाइन अनुमान छ कि 2025 सम्म, चीन संसारको सबैभन्दा ठूलो लक्जरी बजार हुन सक्छ।
वर्तमानमा, मिलेनियम पीढी र Z पीडित उपभोक्ताहरूले चीनको लक्जरी सामानको सबैभन्दा ठूलो खरिद गर्ने शक्ति बनाउँछन्। घरेलू मीडिया रिपोर्ट अनुसार, डिजिटल प्लेटफार्म बिक्री अनुपातमा चीनको लक्जरी माल बिक्री दर 2020 मा 13% देखि 2020 सम्म 23% सम्म बढ्यो, कुल बिक्री 150% बढ्यो। अलिबाबाको ई-वाणिज्य प्लेटफर्म दिन बिल्ली डाटा अनुसार, मिलेनियम पीढी 70% खपत लक्जरी सामानको दायरामा छ।
लिनक्स, WeChat, रातो मल चीनमा लक्जरी ब्रान्डहरू आफ्नै मुख्य प्लेटफर्मलाई बढावा दिनको लागि। बिजुली बिग दिन बिरालोले भने कि 2020 पछि, डिजिटल पसलहरू स्थापना गर्न प्लेटफर्ममा 200 भन्दा बढी लक्जरी ब्रान्डहरू छन्, 130% को बिक्री वृद्धि।
बायाँबाट दाँयाबाट: रातो मल, WeChat, डिजिटल लक्जरी पसलमा दिन बिरालो।
चीनले चीनमा सबैभन्दा ठूलो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफार्म प्रयोग गर्दछ WeChat ले लक्जरी ब्रान्डहरूको डिजिटाइजेशन पनि योगदान दिएको छ। 2019 मा कुल बिक्री मूल्य 800 बिलियन युआन पुग्यो, र जनवरी र अगस्त बीच 115% वृद्धि भएको थियो।
लाल मल, चीन मा एक सानो रातो पुस्तक को रूप मा जानिन्छ, यो एक सम्बन्धित सोशल मीडिया साइट संग एक नाम साझा, चीन को सबै भन्दा विश्वसनीय कस्मेटिक्स खरीद र मीडिया साझा प्लेटफर्म र nbsp; . अब रातो मलहरूमा सामेल हुन 30 भन्दा बढी लक्जरी ब्रान्डहरू छन्, धेरै पनि प्रत्यक्ष गतिविधिहरू छन्, त्यसैले धेरै चिनियाँ ग्राहकहरूले यो ब्रान्ड बुझ्न सक्छन्।